बाल नाटक महोत्सवको नतिजा शैली थिएटर बाट सार्वजनिक – सुनाखरी न्युज
Posted on: April 4, 2021 - 7:31 am
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ – बाल नाटक महोत्सवको नतिजा शैली थिएटरले सार्वजनिक गरेको छ । भर्चुअल रूपमा बाल नाटक महोत्सव आयोजना गरेको शैली थिएटरले उत्कृष्ट तीन नाटकलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ ।
एभरेष्ट एकेडेमी कैलालीको प्रस्तुति “भुमिका” , चुलाचुली रङ्गमन्चको इलामको प्रस्तुति “रिट्ठु” र मर्निङ स्टार विद्यालय सुर्खेतको प्रस्तुति “अक्षर ” लाई महोत्सवमा सहभागी एघार नाटक मध्ये उत्कृष्ट तीन नाटक छनोट गरिएको थियो । भुमिका नाटकलाई पुष्पराज अवस्थिले निर्देशन गरेका थिए भने, रिट्ठु र अक्षर लाई क्रमशः चेतन आङथुपो र रन्जित सिंहले निर्देशन गरेका थिए । त्रि.वि. उप-प्राध्यापक, लेखक तथा समालोचक डा.अशोक थापा र कलाकार,रङ्गकर्मी तथा निर्देशक लुनिभा तुलाधर दुईजना निर्णायक मण्डलले सहभागी नाटकलाई मुल्याङ्कन गरि उत्कृष्ट नाटकको चयन गरेका थिए । “निरन्तर बाह्र वर्ष सम्म बाल नाटक महोत्सव आयोजना गर्नु चानचुने कुरा होईन। अहिलेको विषम परिस्थितिमा भर्चुअल माध्यमबाट भएपनी बालनाटक महोत्सव सफलता पुर्वक सम्पन्न गरेकोमा शैली थिएटर लाई धन्यवाद भन्दै पर्छ।” निर्णायक मध्ये एक सदस्य डा. अशोक थापाले बताए ।
नाटक महोत्सव भर्चुअल भएकोले समापन समारोह समेत भर्चुअल माध्यमबाटै गरिएको थियो । शैली थिएटरले आफ्नो युटुव च्यानल र फेसबुक बाट नतिजा घोषणा सम्बन्धी भिडियो प्रसारण गरेको थियो । ” तुलानात्मक रुपमा सबै नाटक मुल्याङ्कन गर्दा त्यति धेरै भिन्नता थिएन । बिषयबस्तु, प्रस्तुति, अभिनय, सेट, प्रप्स आदिको आधारमा थोरै तलमाथी भने पक्कै थिए। सोही आधारमा हामिले उत्कृष्ट तीन नाटक छनोट गरेका हौं । नाटकहरु युटुवमै भएकोले दर्शकहरूले हेरेर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ ।” भिडियो मार्फत आफ्नो भनाई राख्दै निर्णायक मण्डलमा रहेकी रङ्गकर्मी लुनिभा तुलाधरले बताईन । प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने बाल नाटक महोत्सवमा शैली थिएटर संगै नेपाल संगित तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र रुसि विज्ञान तथा साँस्कृतिक केन्द्रले समेत सहकार्य गर्दै आएका छन । बालबालिकाले रङ्गमन्च बारे जान्ने, बुझ्ने र सिक्ने अवसर बालनाटक महोत्सवले थोरै भएपनी पूरा गरेको महसुस निर्देशक नवराज बुढाथोकीले गरेका छन ।
“बालबालिका संग जोडिएर हुने कार्यक्रम एकदमै कम हुने, त्यसमाथि पनि रङ्गमन्चिय गतिविधि त हुँदै नभएको देखेर आज भन्दा बाह्र वर्ष अघि बाल नाटक महोत्सव आयोजना गरेर बालबालिकालाई रङ्गमन्च सम्म ल्याउने प्रयास भएको महोत्सव निर्देशक नवराज बुढाथोकीले बताए। अहिले नाटकघर सम्म बालबालिका आएर नाटक गर्न सहज नभएकै कारण भर्चुअल माध्यमबाट महोत्सव गर्नु परेको बाध्यता बारे निर्देशक बुढाथोकीले स्पष्ट पारे ।” उत्कृष्ट तिनै नाटक तयार गर्ने समुहलाई समान रुपमा पन्ध्र हजार नगद र डिजिटल प्रमाणपत्र दिएर सम्मान गरिने जानकारी महोत्सवका सह निर्देशक सुवास सुबेदिले प्रकाश पारे ।